Qiimay Qofkaaga: Somaaliland Qaran uu Qof Qiimeeyo! Faallo Xasan Cumar Hoori | Somaliland.Org
February 21, 2013	“Kolba dhagax ayaan rogayaa anigoo ka raadinaya wax cusub.” James M. Buchanan Jr., 1919-2013. James, 1968 waxaa uu ku guulaystay Billadda Noble ee Culuumta Dhaqaalaha isagoo ku mutaystay baadigoobka cilmiyeed ee xidhiidhka dhaqaalaha iyo aqoonta siyaasadda.
billadaha. Waxaa uu curiyay aragti cusub oo aad loogu baahnaa. Waxaana uu muujiyay dedaal dheeraad ah, lexejeclo daleed iyo karti uu ku soo xaadiriyo labeentii dalka. Isaga ayaa mudan billadda ugu sarrayeysa weliba aniga oo insha Allah meel madal ah ku guddoonsiin doona. Waxaan jeclahay inuu iga aqbalo mar haddii isagaba taas oo kale qaranku ka aqbalay. Haddii la waayo cid qiimaysa oo abaalmarisa kan wanaagsan iyo kan xunba, shaki kuma jira dadku in uu “jaantaa roggan” dan moodo. Waa sidaa sunnaha tan hore (ifka) iyo tan danbe (aakhiro) labadaba.
Hase ahaatee, waxaa is weydiin mudan in marka hore la qiimeeyo cidda qaran qiimayn karta. Waxaan soo daliishanayaa dhammaan hay’adaha ku takhasusay arrinkaas, heer qaran iyo mid caalamiba. Waxaa shardi ah in ay kullansadaan dhowr arrimood oo qiimaynta lagu qaddariyo. Waxaa ay ka siman yahiin; Kow waa hay’addo qotto-dheeri cilmi iyo milgo leh; Labo waxaa ku kulma aqoonyahanno takhasus dheeraad ah u leh xaajada; Saddex waxaa ku kaydsan dhammaan xogaha takhasusyada ay dadka ugu gar-qaybinayaan; Afar waxaa si cilmiyeysan looga hawl-galaa (research) mawduuca laga hadlayo iyo ciddii ehel u ah; Shan abaalmarinta ay bixiyaan waxaa ku lifaaqan aqoonsi caalami ah, magac iyo dhaqaale qofkii ku guulaysta uu ku sii dardargeliya sii ambaqaadka hawsha. Hay’adda Noble
1.	Jaamicadda The Royal Swedish Academy of Sciences kuwasoo qiimeeya abaalmarrinada Physics, Chemistry iyo Aqoonta Dhaqaalaha.
2.	Guddiga Nobel-ka ee Jamicadda Karolinska Institutet ee qiimeeya abaalmarinta culuumta Dhismaha Jidhka (Physiology) iyo Daweynta (Medicine).
3.	Jaamicadda The Swedish Academy oo bixisa abaalmarinta Suugaanta.
4.	Guddiga The Norwegian Nobel Committee oo laga soo doorto barlamaanka Norway kuwaasoo soo qiimeeya abaalmarinta NABADDA iyagoo la kaashanaya jaamicadda.
5.	Hay’adda Dhowrista Xuquuqda ee Nobel oo iyagu soo qiimeeya Warbaahinta, Matxafyada iyo Xuquuqda Aadami. Abaalmarinta Boqor Faysal
•	U adeegista Diinta Islaamka
•	Aqoonta Diinta Islaamka
•	Aqoonta Luqada Carabiga iyo Sugaanta
•	Culuumta (Science)
•	Daweynta (Medicine)
Previous PostHambalyo Meher: Boqorka Cabdifataax Maxamed Cawaale Iyo Boqorada Ayaan Nuur Muuse Bili-biliNext PostAbwaan Hadraawi oo ka waramay Halka Dhalan Rogga Dhaqan kaga Yimid Ummadda	Blog